नेपाल एसबिआई बैंक [आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण]
भदौ २५, काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको वितरणयोग्य नाफाको आधारमा लाभांश क्षमता ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । गत चौथो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ३३ करोड ९२ लाख ५ हजार रहेको हो ।
उक्त अवधिसम्म बैंकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ७७ हजार छ । गत चौथो त्रैमासम्म रू. ९६ करोड ९ लाख ६१ हजार खुद नाफा गरेको बैंकको जगेडा कोषमा रू. ४ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख ३१ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
आफ्नो ग्राहकहरुबाट रू. १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको बैंकले रू. ९६ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० दशमलव १२ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६२ दशमलव १९ रहेको छ । बिहीवार बैंकको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य रू. ३८३ पुगेको छ ।
१३ जुन २०२१ ९ सेप्टेम्बर २०२१
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो टुप्पी र छोटो पुच्छर सहितको कालो लामो मैनबत्ति बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा आगामी दिनमा कम्पनीको शेयरमूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्छ ।
आरएसआई न्यूट्रल जोन ३३ दशमलव ३२ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमारहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव ७९ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव न्यूून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्य रेखाभन्दा तल छ ।
बिहीवारको शेयरमूल्य रू. ३८३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू ४०१ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ । कम्पनीको गत कारोबार दिन अर्थात् बिहीवार शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३८२ रहेको थियो जुन ६१ कारोबार दिन यताकै न्यून मूल्य रहेको छ ।